DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP PAVILION G6 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka HP Pavilion g6 laptọọpụ
N'iji netwọk mmekọrịta mmadụ niile, ọ bụ ihe dị mkpa ịmara otú e si eleta enyemaka a. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị usoro ị nwere ike ịlele akụkọ ihe mere eme nke akaụntụ VK gị.
Lelee VC Sessions
Ná mmalite, ọ dị ezigbo mkpa ịme ndoputa na usoro ị na-ele nsụgharị mgbanwe na VK metụtara kpọmkwem ọrụ nke ihe nchọgharị Ịntanetị eji. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-emetụ na nchọgharị ndị a ma ama, ebe ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-eji ya.
Hụkwa: Otu esi ele akụkọ ihe mere eme na ihe nchọgharị
Biko mara na n'isiokwu a anyị ga-emetụkwa isiokwu ọzọ metụtara ọrụ pụrụ iche. "Akụkọ VKontakte".
Lelee nleta VK na Google Chrome
Ihe nchọgharị weebụ Google Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị ewu ewu taa, n'ihi ya ndị ọrụ na-enwekarị nsogbu na ya. Ọzọkwa, engine Chromium emeela ọtụtụ usoro mmemme ndị yiri nke ahụ.
Hụkwa: Otu esi ele akụkọ ihe mere eme na Google Chrome
Mepee ihe nchọgharị weebụ wee pịa akara ngosi nwere oghere atọ dị na n'akụkụ aka nri nke toolbar.
N'etiti ndepụta ndepụta nke ngalaba, weghachite akara na ihe ahụ "Akụkọ ihe mere eme".
Dịka ihe na-esote site na ndepụta nke gosipụtara, họrọ ngalaba ahụ n'otu aha.
Ị nwere ike mepee ederede achọrọ iji ụzọ mkpirisi ụzọ keyboard "Ctrl H".
N'otu oge na ibe na ndepụta nke nleta, chọta akara "Chọọ n'akụkọ ihe mere eme".
Na igbe ederede, tinye URL zuru ezu nke ebe nrụọrụ weebụ. Netwọk VKontakte.
Ugbu a, kama ịkọ akụkọ nke nleta na usoro ịrị elu, nanị ihe edere ederede n'ime ebe nrụọrụ weebụ VC ga-egosipụta.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, biko mara na ọ bụrụ na ịbanye n'ime akaụntụ Google na mmekọrịta na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, a ga-echekwa akụkọ nleta ahụ na-echekwa na sava. Echefula na enwere ike ihichapụ data na mpaghara ahụ.
Hụkwa: Otu esi kpochapụ akụkọ ihe nchọgharị gị na Google Chrome
Lelee nleta VK na Opera
N'ihe banyere Opera nchọgharị Ịntanetị, usoro ilele ihe omume ahụ na-eme n'ụzọ dịtụ iche, mana n'otu ụkpụrụ ahụ dị na Chrome. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ejikọta data dị na Opera na ndị sava n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Hụkwa: Otu esi ele akụkọ ihe mere eme na Opera
Mwepụta ihe nchọgharị weebụ na Opera na n'akụkụ akaekpe aka ekpe pịa bọtịnụ ahụ. "NchNhr".
Site na ndepụta nke ngalaba, họrọ "Akụkọ ihe mere eme"site na ịpị ya.
Chọta ebe ọchụchọ n'etiti ihe nchọgharị.
Dejupụta igbe ahụ site na iji akara zuru ezu nke adreesị nke saịtị VKontakte.
Iji pụọ na ọnọdụ ọchụchọ nke ihe dị na akụkọ ihe mere eme, jiri bọtịnụ ahụ "Wepụ chọọ".
Mgbe ịchọrọ site na isiokwu, ị nwere ike ịlele ndepụta nke ụgbọelu niile na saịtị VK.
Nke a mezue usoro ikiri ihe omume kachasị na saịtị VKontakte site na iji Opera nchọgharị.
Hụkwa: Otu esi kpochapụ akụkọ ihe nchọgharị gị na Opera
Lelee nleta VK na Yandex Browser
Na-ekwu maka otu components dị na Yandex Browser, ị nwere ike ịhụ na ọ bụ ụdị ngwakọ n'etiti Opera na Chrome. Site n'ebe a, enwere nuances pụrụ iche banyere ọnọdụ nke data achọrọ.
Hụkwa: Otu esi ele akụkọ ihe mere eme na Yandex Browser
Mgbe ị mepee ihe nchọgharị Ịntanetị na Yandex, mepee menu isi na akuku aka nri nke window window.
Site na ndepụta e nyere, ịkwesịrị ịkụnye òké ahụ n'elu akara "Akụkọ ihe mere eme".
Ugbu a, ị ga-ahọrọ ihe na otu aha ahụ, nke dị na elu ndepụta ahụ.
N'elu aka nri n'elu peeji nke na-emepe, chọta igbe ederede iji chọọ.
Fanye URL nke saịtị VKontakte na igbe gosiri na pịa "Tinye".
N'etiti isi ọdịnaya nke ibe ahụ, ị ​​nwere ike ịlele mgbanwe ọ bụla na netwọk mmekọrịta.
Ọ bụrụ maka ihe ọ bụla ị chọrọ iji kpochapụ ihe nchọgharị niile, jiri isiokwu kwesịrị ekwesị.
Leekwa: Otu esi kpochapụ akụkọ ihe mere eme na Yandex Browser
Lelee nleta VK na Mozilla Firefox
Ihe nchọgharị Ịntanetị Firefox dị na isiokwu a bụ ihe kachasị iche, ebe ọ bụ na e mepụtara ya na engine ọzọ. N'ihi njirimara a, nsogbu na-esitekarị mgbe onye ọrụ kpebiri ịgbanwe na Chrome na Firefox.
Hụkwa: Otu esi hụ akụkọ ihe mere eme na Mozilla Firefox
Mgbe ị na-etinyere ihe nchọgharị weebụ, mepee menu isi nke usoro ihe omume ahụ n'elu aka nri.
N'etiti ndepụta ndị a, choro akara ngosi ahụ na mbinye aka "Akwụkwọ".
Na ala nke mgbakwunye ọzọ, pịa bọtịnụ ahụ. "Gosi magazin zuru ezu".
Na windo ohuru nke ihe nchọgharị Intanet "Ọbá akwụkwọ" soro ala eserese "Ndekọ Chọọ".
Dejupụta akara dịka nsụgharị zuru ezu nke adreesị nke saịtị VKontakte ma jiri igodo "Tinye".
Na windo dị n'okpuru ebe ọchụchọ, ị nwere ike ịhụ nleta ọ bụla na weebụsaịtị VC.
Leekwa: Otu esi kpochapụ akụkọ ihe mere eme na Mozilla Firefox
Na nchịkọta ọchụchọ a maka akụkọ na ihe nchọgharị Ịntanetị nwere ike mechaa.
Lelee akụkọ enyi
Akụkụ nke akụkụ ọrụ VKontakte a dị na ya dị ọhụrụ, ọ bụ na nchịkwa na 2016. A na-ezubere ihe a iji wepụta oge ọ bụla na akwụkwọ na-esote na ngọngọ pụrụ iche na saịtị ahụ. Ọ bụghị ndị ọrụ saịtị niile maara otú e si ele "Akụkọ" VC, ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-eleba usoro a anya n'ụzọ zuru ezu.
"Akụkọ banyere ndị enyi" na njirimara zuru oke nke saịtị ahụ
Njirimara a dị maka ojiji naanị site na ndị ọrụ nke ngwa ngwa ma e wezụga usoro nlele.
Iji hụ "Akụkọ" Ị nwere ike ịchọta ndị enyi gị site na ịga na mpaghara ahụ. "Akụkọ".
A ga-etinye ngọngọ dị mkpa na mmalite nke ibe.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta mpaghara ahụ dị mkpa, mgbe ahụ, o yikarịrị, ndị enyi gị ebipụtaghị ihe ndị dị mkpa.
Na mgbakwunye na nke a, ị nwere ike ịga ozugbo na onye ọrụ.
Ọ bụrụ na mmadụ bipụtara ọ dịkarịa ala otu n'ụbọchị "Akụkọ ihe mere eme"mgbe ahụ ọ ga-egosipụta na ngọngọ ahụ "Foto" na akwukwọ profaịlụ kachasị.
"Akụkọ" nwere ike dị ọtụtụ n'otu oge n'usoro oge n'usoro n'otu mpaghara ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịchọta na ịlele ihe onwunwe kwesịrị ịme ka nsogbu ghara ịdị.
Akụkọ enyi na ngwa ngwa mkpanaka
Na ngwa VKontakte ọrụ, ndị ọrụ nwere ohere ọzọ ịmepụta ndị ọhụrụ. "Akụkọ". N'otu oge ahụ, ọdịnaya ndị ọzọ na-enye dị maka ịlele na ebe a kapịrị ọnụ nke ebe a.
Rịba ama na ihe dị na ajụjụ dị na ngọngọ kwekọrọ naanị maka awa iri abụọ na anọ site na mbipụta, emesia a na-ehichapụ ya na-akpaghị aka.
Iji menu ihe ederede nke VK ngwa ngwa gaa na mpaghara "Akụkọ".
Iji bọtịnụ ahụ "Akụkọ m", ị nwere ike ijide onwe gị oge ọ bụla.
N'elu ebe a, a ga-enye gị otu ngọngọ na aha njirimara, ihe a ga-amụ site n'ịpị onye ịchọrọ.
Ụzọ ọzọ nke ịnweta mpaghara achọrọ ga-achọ ka ị gaa na ebe obibi onye ọrụ, dịka ọmụmaatụ, site na ịchọ.
Ozugbo onye ọrụ ahụ pụtara na ajụjụ ahụ, ngalaba achọrọ ga-adị gị n'aka na ngọngọ pụrụ iche.
Anyị nwere olileanya na ị gaghị enwe nsogbu na usoro ịlele Akụkọ enyi.
Na-agwụcha isiokwu a, ọ gaghị ekwe omume ikwupụta na nchịkwa VKontakte, n'etiti ihe ndị mara mma, na-enye onye nwe akaụntụ ahụ ọrụ dịka "Sessions arụ ọrụ". N'inwekwu nkọwa, anyị weere akụkụ a nke interface na ihe pụrụ iche.
Hụkwa: Otu esi esi na VC niile pụọ
Mgbe ị tụlechara ihe ọmụma ahụ, nsogbu gị na ịchọta akụkọ nke nleta na ịlele ihe pụrụ iche "Akụkọ" ga-edozi. Ezigbo ihu!